एकान्तवास हैरानी होइन जीवन बाँच्ने कला हो - Jhilko
एकान्तवास हैरानी होइन जीवन बाँच्ने कला हो
विश्व हल्लाउन आइपुुगेको कोरोना भाइरस कोभिड १९का कारणले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । यो हामी सबैले भोगिरहेका छौं । हामी नेपालीभन्दा पहिले विश्वका अन्य मुुलुुकहरुले यसको अभ्यास गरेका हुन् । कोरोना भाइरस आरम्भ भएको चीनले पहिलो अभ्यास गरेको हो । त्यहाँ सीमा सबै ठप्प छन् भन्ने सुन्दा त्यहाँका मानिसले कसरी गुुजारा गरिरहेका होलान भन्ने जिज्ञासा हाम्रो मनमा उत्पन्न हुुने गर्दथ्यो । अहिले हामीले त्यही भोगिरहेका छौं ।
नेपाल सरकारले चरणबद्ध रुपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको कार्यक्रम अगाडि सार्दै जाँदा एकान्तवास सायद भोग्नु पर्दैन भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो तर आज त्यही भोगिरहेका छौं । यो भोगाई धेरैका लागि सहज भएको छैन यो यथार्थ हो । यति लामो समय हामी एउटै कोठामा बन्दी जस्तै भएर कहिल्यै बसेको थिएनौं । जेलमा बन्दी जीवन विताएकाहरु पनि भित्र आपसमा चाहे जति भेट गर्ने र गफगाफ गर्ने गर्दछन् तर हामी परिवारमामात्र सीमित हुन पुुगेका छौं । यसलाई सहज रुपमा लिन नसक्नेहरुका लागि वर्तमान अवस्था नेपाल सरकारले कष्ट दिएको भन्ने पनि लागेको होला । जुुन कुुरा सत्य होइन ।
पहिलो कुरा सरकारले किन एकान्तबासको घोषणा गरेको होला ? पहिले एकसाता भनेकोमा किन पुुनः अरु एकसाताको म्याद थपेको होला ? यसका वारेमा जान्न जरुरी छ । यसरी आफ्ना नागरिकहरुलाई एकान्तबास (लकडाउन)मा राखेर सरकारका लागि हुुने फाइदा के हो ? यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । आम नागरिकको सुरक्षा गर्नुु सरकारको कर्तब्य हो । समयमा लकडाउन नगरेको भए यतिवेलासम्म नेपालले ठूलो क्षति ब्यहोरेको हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म हामी शंका गरेरमात्र बसेका छौं तर ठूलो नोक्सान ब्यहोर्नुु परेको छैन । यही कोरोनाको कारणले कतिपय मुुलुुकले कर्पm्यू अर्थात निषेधाज्ञा लागुू गरेका छन् । कमसेकम हामी आफूलाई आवश्यक बस्तुु खरिदका लागि छोंटो समय भए पनि यसको नियम पालना गरेर बाहिर जान पाएका छौं । निषेधाज्ञा लागुू भएका मुुलुुकमा त्यहाँका नागरिकको के हविगत होला ? किन ती मुुलुकहरु त्यस्तो निर्यण गर्नु पुुगे होलान ? एकपटक यसलाई पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । के त्यो राज्यको रहरले होला ?अवश्य पनि होइन ।
यतिवेला इटलीले ठूलो क्षति ब्यहोरी रहेको छ । त्यहाँको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ भनिन्छ । त्यो मुुलुुकले कति नागरिक गुमाउने हो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । यी पंक्तिहरु तयार पार्दासम्म हामीले कोरोनाबाट एकजना पनि नागरिक गुुमाएका छैनौं । यो ठूलो उपलब्धि हो । विकसित तथा सुुविधा सम्पन्न मुुलुकले ठूलो क्षति ब्यहोरेका छन् भने हाम्रो हविगत के हुुँदो हो ? यस मानेमा नेपाल सरकारले नागरिकलाई समयमा सजग बनायो भनेर धन्यवाद दिनु पर्दछ ।
एकान्तबास(लकडाउन)मा बस्दा परेको असहज वातावरणलाई सहज बनाउनतर्फ आफै लाग्नुपर्दछ । यो असहज एक दुुई स्थानमा मात्र होइन विश्वले ब्यहोरेको छ, विश्वका सबै नागरिकले ब्यहोरेको अवस्था हो । हामी सबै नेपालीले त्यही भोगिरहेका छौं । यो लकडाउनको अवस्थालाई पहिलो कुरा त अरुलाई हेरेर चित्त बुुझाउने हो । हामीले मात्र होइन विश्वका सबै नागरिकले यही भोगिरहेका छन् । दोश्रो आफू कसरी सहज वतावरणमा बस्न सकिन्छ र परिवारलाई कसरी सहज वातावरणमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर थोरै भए पनि सोंचाई राख्नुपर्छ । जीवनलाई बदल्ने भनेको यही हो । असहज परिवेशमा जीवन वदल्न जान्नुपर्दछ ।
हरेक कुरालाई नकारात्मक कुरामा लगेर राख्ने होइन । यसो गरियो भने आफूलाई सकारात्मतातिर लान सकिदैन । सकेसम्म कुुनै पनि कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुु, बुुझ्नुु हुुँदैन । अझ यस्तो संसारले भोगेको असहज वातावरणमा हामीले नकारात्मक कुरा सोच्न पुुग्यौं भने जीवन बोझ बन्ने छ । यो समस्यालाई कसरी झेल्न र टार्न सकिन्छ ? पहिले त यसको खोजी आफैबाट हुनुपर्दछ । आफूले खोजी गरेको कुुरा आफ्ना लागि फाइदाजनक र दीर्घकालीन हुनेछ । भविश्यमा आफूले पनि गर्व गर्ने खालको हुुनेछ । दोश्रो आफूभन्दा जानकार नजिकमा भए उहाँसँग सहयोग लिने । उहाँको दिनचर्या कसरी चलेको छ त्यसको वारेमा जानकारी लिने चेष्टा गर्नुु पर्दछ । त्यो पनि सम्भव छैन भने कुुनै सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर पनि अलिक टाढाका जानकार ब्यक्तिसँग जानकारी लिन सकिन्छ । यो असहज परिवेशमा आफूलाई सहज वातावरण बनाउने कुराको ज्ञान छैन भने अरुबाट सिक्ने कुरा पनि राम्रै हो । एक त राम्रो कुराको जानकारी अरुबाट लिनु सधै बेश कुरा हो अझ यो समयमा त झन् वेश हुने छ ।
विहानदेखि साँझसम्म के के गर्ने भनेर एउटा खाका बनाउने अनि त्यही खाका अनुुसार आफू आफ्नो परिवारलाई चलाउने प्रयास गर्ने हो भने समयको सदुुपयोग हुन सक्नेछ । त्यही खाकाभित्र घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुुुनुुहुन्छ भने केही समय उहाँका जीवनका भोगाइहरु सुन्ने कार्यक्रम पनि बनाउनुु पर्दछ । आजभन्दा दुुई दशक र अहिलेको अवस्थामा जमिन आसमानको फरक आएको छ । दुुई दशकअघिका कुराहरु सुुन्दा अहिले ती कुुराहरु कतै एकादेशका कथा जस्ता लाग्नेछन भने कतै ज्ञानवद्र्धक पनि हुुुनेछन् । दुुई दशकदेखि अघिका कुराहरु दुुई दशक यताका युुवा युुवतीलाई याद छैन । त्यो समयमा मेलापात गएका कुराहरु, ढिकी जाँतो गरेका कुरा, गुुवाला बछेला गरेका कुरा, कतै दुुवाली थुुनेको र माछा मारेको कुरा, त्यो समयको राज्य ब्यवस्था र शासकको काम कुराहरु कति रोचक होलान ? हो यस्ता कुराहरु घरमै बसेर सुुन्न पाइन्छ भने त्यो पनि सौभाग्य हो । अहिलेसम्म कार्यब्यस्तका कारणले वर्तमान युुवा युुवतीले ती कुराहरु सुन्ने अवसर पाएका छैनन् । अन्तरपुुस्ता सम्वाद भएको छैन । जुुन कुरा हुन आवश्यक छ । लेखपढ गर्ने सीप भएकाहरुले आफूलाई त्यसैमा ब्यस्त बनाउन पनि सक्नुुहुुनेछ । कसै कसैले आफ्नो त लेख्ने अभ्यास छैन भन्नुु हुन्छ । अभ्यास छैन भने आजैबाट थाल्नुुहोस् ।
तपाईलाई विषय बस्तुु जुरेको छैन भने वर्तमान अवस्थामा आफूले प्रतिदिन भोगेका कुराहरु लिपिमा उतार्ने प्रयास गर्नुुस् । सानो डायरीमा दैनिकी लेख्ने प्रयास गर्नुु भयो भने केही समय त्यसमा ब्यतित हुनेछ । मनमा भएको वेचैनी पनि दूर हुुनेछ । आजको तपाईको लिपि भोलिको इतिहास हुनेछ । विहानको समय योग, ज्ञान ध्यान र अध्ययनमा पनि लगाउन सकिन्छ । गीत संगीतमा सोख भएकाहरुलाई आफूलाई ब्यस्त राख्न झन् सहज छ । गीत संगीतको अभ्यासले समयको राम्रो सदुुपयोग हुनेछ । करेसाबारी हुनेहरुले केही समय आफूलाई करेराबारीमा ब्यस्त राख्न सक्नुहुनेछ । विहान उठ्ना साथ एउटा अठोट गर्न सिकौं कि आज दिनभरमा म यति यति काम गर्ने छु भनेर । अनि सोही अनुुसार आफूलाई परिचालन गर्ने हो भने यी दिनहरु उपलब्धिमूलक हुनेछन् । सिर्जनात्मक भएर दिन वित्नेछन् ।
शहरमा भन्दा ग्रामीण भेगमा समयलाई सदुुपयोग गर्न सहज छ । कृषकहरुका लागि एकान्तबासले त्यति असर पार्दैन । बाहिर अरुसँगको संसर्गमा जानेदेखि बाहेक अन्य कार्यकलापहरु आफ्नै घरआँगनमा गर्न सकिन्छ । खेतीपातीको काममा लाग्नेहरुका लागि कुुनै अप्ठेरो परिवेश नै छैन । चाहे शहरमा बस्ने होउन चाहे ग्रामीण भेगमा बस्ने होउन खोज अनुुसन्धान गर्नेहरुका लागि यो राम्रो अवसर नै हो । साहित्यमा कलम चलाउनेहरुले यसै समयको सदुुपयोग गरेर आफ्नो रुचीको विधामा कलम चलाउने हो भने एउटा राम्रो कृति प्रकाशित हुने सामग्री पुुग्ने छ । यो भन्दा पनि अन्य धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । हरसम्भव उपायको खोजी गर्नतिर लाग्नुपर्दछ । लकडाउन अर्थात एकान्तबास हैरान होइन जीवनलाई ऊर्जावान बनाउने एउटा राम्रो अवसर पनि हो । जीवन बाँच्ने सिकाउने एउटा कला पनि हो । अस्तुु, padam6100@gmail.com
अगरबतीबाट आगलागी हुँदा आधा दर्जन पसल जलेर नष्ट
डा. बलराम न्यौपानेमाथि गम्भीर आरोप, एउटै घाउ सफा गरेको...
डा. न्यौपानेले सामान्य घटनालाई पनि ठुलो बनाएर विरामीसँग रकम लिने गरेको उनीहरुको...
७० हजारसहित कम्प्युटर अपरेटर पक्राउ
सर्लाहीमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नवीनकुमार सिंहलाई आज रु ७० हजार घुससहित नियन्त्रणमा...